Guddiga doorashada gudoonka aqalka hoose ee Barlamanka Somalia oo gooyey waqtiga codbixinta
MUQDISHU, Somalia- Kulan maanta isugu yimaadeen guddiga doorashada gudoonka aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka Somalia ayaa waxay ku soo gudbiyeen waqtiga la qabanayo doorashooyinka gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa.
Guddiga doorashada oo iska sii xuley guddi hoosaadyo ayaa soo gudbiyey shax ay ku Qoran tahay taariikhaha la qabanayo araajida, musharaxiinta khudbada akhriyayaan iyo xiliga doorashada gudoonka iyo ku xigeenadiisu dhaceyso.
Halkaan ka akhri qoraal guddiga doorashada soo saarey kulankoodii maanta..
Faarax Cabdulqadir oo isu sharaxay Guddonka Barlamanka Federaalka
Soomaliya 05.01.2017. 20:41
MUQDISHU, Somalia- Farax Cabdulqaadir oo ka tirsanaan jirey golaha xukuumada Federaalka ahaan jirey a Xildhibaan ka tirsanaan jirey Barlamanka watigiisu dhamaadey ayaa maanta galinkii dambe isu sharaxay Gudoomiye ku xigeenka kowaad aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka ...
Barlamanka Federaalka ee cusub oo magacaabey guddiga doorashada gudoonka [AKHRI]
Soomaliya 01.01.2017. 17:20
​War-murtiyeed kasoo baxay kulan dhex-maray Madaxweyne Gaas iyo Guddiga Doorashooyinka Federaalka [Akhriso]
Puntland 22.06.2017. 13:01
​Akhriso: Waqtiga doorashada Madaxweynaha Somalia oo la mudeeyay
Soomaliya 25.01.2017. 16:13
​Somalia: Waqtiga Doorashada Guddoonka Aqalka Sare oo la iclaamiyay
Soomaliya 16.01.2017. 19:17
​Musharaxiin Khudbado ka jeedinaya Golaha Shacabka
Soomaliya 09.01.2017. 11:08
Magacyada musharaxiinta guddonka aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka Somalia
Soomaliya 05.01.2017. 15:10
Burma: Kalfadhigii Baarlamaanka cusub oo furmay.
Caalamka 03.02.2016. 01:35